Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda Somaliland Iyo Kumanaan Qof Oo Ka Qaybgalay Aaska Marxuum Mujaahid Cali Hayaan | Araweelo News Network (Archive) -
Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda Somaliland Iyo Kumanaan Qof Oo Ka Qaybgalay Aaska Marxuum Mujaahid Cali Hayaan
Burco (ANN)Alle ha u naxaristee Mujaahid Cali Ismaaciil Xaashi (Cali Hayaan) oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee SNM aya maanta si heer qaran ah loogu aasay magaalada Burco maanta, waxaana aaska marxuunka ka qayb galay Wasiirro ka tirsan xukuumada Somaliland, Mujaahidiin,
Madax dhaqameedl, Salaadiin,Siyaasiyiin iyo dadweyne aad u tiara badan oo ka kala yimi gobolada Jamhuuriyadda Somaliland.
Dadka ka soo qaybgalay aaska ayaa si mug leh uga sheekeeyay taariikhda uu mujaahidkaa, waxayna ku tilmaameen inuu ka mid ahaa mujaahidiintii S.N.M ee sida hagar la’aanta ah uga qayb qaatay dagaaladii dib xoraynta halgankii lagaga hortegey dawladii keli taliska ahayd ee Maxamed Siyaad Bare.
Wasiirka Xannaanada Xoollaha Somaliland Dr. Cabdi Aw daahir Cali ayaa sheegay in xiligii dagaalada dib xoraynta uu aqoon badan u lahaa marxuumka geeriyooday, isaggoo arrintaa ka hadlayayna wuxuu yidhi, “Waxan Mujaahidka isku lahayn aqoon badan waxaanan anigu baratay mujaahidka waqtigii halganka oo aan ahaa anigu ciyaal Iskuul, isaguna uu ahaa Kornayl waxaanan maanta ku sifayn karaa inuu ahaa mid ka mid ah dadkii halbawlaha u ahaa xornimada aan maanta hoos hadhsanayno.”
Waxaanu Wasiirku Marxuumka Ilaahay uga baryay inuu naxariistii jano ka waraabiyo qoskii iyo shacbiga Somaliland-na samir iyo iimaan ka siiyo.
Wasiirka wasaarada Kaluumaysiga iyo Khayraadka badaha Md. C/laahi Jaamac Cismaan (Geeljire) ayaa sheegay inuu ahaa marxuunkani ruux ka mid ah dadka wanaagsan ee wadaniyaduleh isagoo Ilaahay uga barayay in isaga iyo mujaahidiintii kale ee shahiidayba uu naxaristii jano ka waraabiyo.
Mujaahidiinta Maxamed Kaahin Axmed iyo Ibraahim Dhegaweyne,Baashe Cabdi Gaboobe oo iyana ka mid aha mujaahidiintii ay soo wada shaqeeyeen Marxuumka ayaa tilmaamay inuu ka mid ahaa raga fara ku tiriska ah ee ka qaybqaatay dagaaladii qadhaadaa ee xukunka lagaga tuuray taliskii milateri ee Maxamed Siyaad Barre ee sida arxandarada ah u xasuuqay shacbiga Somaliland.
Waxaanay illaalahay uga baryeen marxuunka inuu naxaristii janno ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxayna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Alle ha u naxariistee Marxuum- Cali Hayaan wuxuu ku dhashay Gobolka Togdheer,waxaanu dugsiyadiisii hoose dhexe ku dhamaystay magaalada Burco intii u dhaxaysay 1951-1956.
Sandkii 1961 ayuu mujaahid Cali Hayaan Jaamac tababar Milatari u tagay dalka Masar.waxaanu markii uu ka soo noqday ka mid noqday sariikiisha ciidamaddii Soomaaliya.
Marxuumku wuxuu ka mid noqday sarkiishii Ururkii dib u xoraynta dalka ee SNM waxaanu marxuumku ifka kaga tagay 7 carruur ah oo isugu jiray lix wiil iyo gabadh.